Effect of omitting dinner in weight loss - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
ဝိတျခဖြို့အတှကျ ညစာ ရှောငျသငျ့လား
သငျဟာ ဝိတျခသြူတဈယာကျဆိုပါက သငျ့အနနေဲ့ ကယျလိုရီတှကေို လိုတာထပျ ပိုမစားဖို့ ၊ လြှော့မစားဖို့လိုပါတယျ ။ ဒါကွောငျ့ ညစာရှောငျခွငျးလိုမြိုးတှဟော ကယျလိုရီ လြှော့ခရြာမှာ အလှယျဆုံးနညျးလမျးဖွဈလာပါတယျ ။ ဒါပမေယျ့ သတိပွုရနျမှာ ဒီလို ညစာရှောငျခွငျးလိုမြိုးကနေ ကနျြးမာစှာ ဝိတျမကဘြဲ ပွောငျးပွနျအကြိုးသကျရောကျမှုအနနေဲ့ အလှနျအမငျးဆာလောငျမှတျသိပျစခွေငျး ဒါမှမဟုတျ လုံလောကျတဲ့ အာဟာရမြား မရရှိခွငျး အစရှိသညျတို့ ဖွဈသှားစနေိုငျပါတယျ ။
သငျ့အနနေဲ့ ကိုယျအလေးခြိနျကဆြငျးစရေနျ လုပျဆောငျနသေူဆိုပါက ဘယျလိုနညျးလမျးပဲ သုံးပါစေ အဓိက ရညျရှယျခကျြမှာကယျလိုရီနညျးနညျးစားသုံးရေး ဖွဈသညျ ။ ခန်ဓာကိုယျတှငျ အဆီတပေါငျတိုငျးသညျ ကယျလိုရီ ၃၅၀၀ နှငျ့ညီမြှသညျ့အတှကျ တဈနကေို့ ကယျလိုရီ ၅၀၀ လြှော့စားပါက တဈပတျလြှငျ အဆီတပေါငျ ကမြညျဟု ဆိုနိုငျသညျ ။
လူအမြားစု အထူးသဖွငျ့ ကနြျောတို့လမွနျမာ လူမြိုးမြားအတှကျ နလေ့ညျစာ ညစာသညျ အဓိက စားသုံးကွသောကွောငျ့ ကယျလိုရီမြားတတျလရှေိ့သညျ့အတှကျ ညစာရှောငျရှားခွငျးဟာ ကယျလိုရီအမြားကွီး လြှော့ခပြွီးသား ဖွဈပါတယျ ။ သို့သျော ဒီနညျးလမျးဟာ သငျ့အနနေဲ့ ကနျြတဲ့ မနကျစာ နလေ့ညျစာလိုတှမှော အလှနျအကြှံအမြားအပွားစားသုံးနပေါက ဒီညစာ ရှောငျတဲ့အတှကျ ဆုံးရှုံးရတဲ့ ကယျလိုရီတှဟော အဟောသိကံ အလကားဖွဈသှားနိုငျပါတယျ ။ ဒါကွောငျ့ သငျ့အနနေဲ့ ကနျြတဲ့အခြိနျတှမှော ကယျလိုရီကို တှကျခကျြပွီးညီညှတျမြှတအောငျ စားသုံးဖို့လိုပါတယျ ။
ဘယျလိုအကြိုးသကျရောကျမှုတှေ ရှိသလဲ ?
ဒီလိုညစာရှောငျခွငျးရဲ့ ကောငျးကြိုး ဆိုးကြိုးတှနေဲ့ပတျသတျပွီး နှဈပေါငျးမြားစှာ ငွငျးခုံနကွေဆဲဖွဈပါတယျ ။ လကျရှိသုတသေနရလာဒျတှအေရတော့ မှနျကနျစှာလုပျဆောငျပါက ကနျြးမာရေးကို အကြိုးမြားစသေလို လှဲမှားစှာ လုပျဆောငျပါက အသကျအန်တရာယျပေးစသေညျ အထိ ကနျြးမာရေးထိခိုကျစနေိုငျပါတယျ ။
လူတဈယောကျအနနေဲ့ အစားတဈနပျအမြားကွီးစားလိုကျပါက ခန်ဓာကိုယျတှငျး သကွားပမာဏဟာ တရှိနျထိုးမြားပွားလာပါတယျ ။ ဒီလိုအဖွဈအပကျြဟာ ညစာစားသုံးခြိနျမှာ ပိုတှရှေိ့ရတယျ ။ ညစာကို အမြားအပွား စားသုံးပွီး အိပျယာဝငျတဲ့အခါ ပိုလြှံတဲ့ သကွားဓာတျတှစော အဆီအဖွဈပွောငျးလဲ သိုလှောငျလိုကျတဲ့အတှကျ လူတှဝေလာရခွငျး ဖွဈပါတယျ ။
ဒါကွောငျ့မှနျကနျတဲ့ ညစာရှောငျရှားခွငျးဟာ ကနျြးမာရေးကို အလှနျအထောကျအပံ့ဖွဈစပေါတယျ ။ သို့သျော အလှနျအကြူး ရှောငျရှားခွငျး အခြိနျအတျောကွာကွာလုပျခွငျးကတော့ ခန်ဓာကိုယျကို ထိခိုကျစမှောပါ ။
ခန်ဓာကိုယျဟာ နစေ့ဉျလှုပျရှားဖို့အတှကျ အာဟာရတှေ လိုအပါပါတယျ ။ အခြိနျအတျောကွာကွာ မြှတတဲ့ စနဈမရှိတဲ့ ညစာရှောငျရှားခွငျးမြိုးဟာ ခန်ဓာကိုယျတှငျး အာဟာရပွတျလပျမှုကိုဖွဈစပွေီး နောကျဆုံး လူကို လဲသှားစမှောပါ ။
ဒါကွောငျ့ ဒီလို ညစာရှောငျရာမှာ
* စိတျခရြတဲ့ နညျးလမျးလိုပါတယျ ။ အခြိနျတိုတဈခုအတှငျး ( အလှနျဆုံး တလတာ ကာလ ) မှာ ကနျြးမာပွီး သခြောတိကတြဲ့နညျးလမျးနဲ့ ညစာရှောငျရှားပါက ကနျြးမာရေးကို အမြားကွီး အထောကျအကူပွုပါတယျ ။
* ဒါကွောငျ့ ဖွညျးဖွညျးနဲ့ နိုငျသလောကျ အခွအေနကေအစပွုပွီး ညစာရှောငျပါ ။ ဒီလိုလုပျခွငျးဟာ အခြိနျတျောတျောကွာကွာ ရှောငျနိုငျစပွေီး ခန်ဓာကိုယျအတှကျ ဒဏျခံနိုငျမှုကို တိုးမွငျ့စပေါတယျ ။
* ညစာရှောငျရနျ ဆုံးဖွတျပွီးပါက အာဟာရပညာရှငျ ဒါမှမဟုတျ ဆရာဝနျနှငျ့တိုငျပငျပါ
* အမှနျကနျဆုံး အစားရှောငျနညျးဆိုတာ မရှိပါဘူး ။ တခြို့ဘာသာရေးအရ ဥပုဒျစောငျ့သူတှဟော တဈနကေုနျ အစားစားခွငျးကို ရှောငျကွဉျပွီး ညနေ နဝေငျခြိနျမှ အစာပြော့ပြော့ကို စားကွပွီး တခြို့ဘာသာရေးတှမှော အရညျပဲသောကျရတာမြိုး ရှိပါတယျ ။ အဓိကအခကျြမှာ သငျနှငျ့လိုကျဖကျညီသော အစားအစာရှောငျနညျးကို သိရှိရနျ လိုအပျခွငျးပဲ ဖွဈပါတယျ ။
* အခြိနျကာလ အတျောကွာကွာထိ ညစာရှောငျရှားခွငျးဟာ ခန်ဓာကိုယျအတှကျ အန်တရာယျပါ ဖွဈစပေါတယျ ။ အလှနျအမငျး အစားရှောငျခွငျး ဟာ ကနျြးမာရေးအရ မကောငျးသလို အသကျအန်တရာယျကိုပါ အန်တရာယျပေးနိုငျပါတယျ ။
* ဒီလို ညစာရှောငျခြိနျတှမှော ဗီတာမငျ အားဖွညျ့ဆေးတောငျ့တှစေားပေးခွငျးကလဲ ခန်ဓာကိုယျအတှကျ အထောကျအကူပွုပေးပါတယျ ။
ညစာရှောငျခွငျးဟာ ဝိတျခလြိုသူတှအေတှကျ ကနျြးမာရေးကို ကောငျးမှနျစသေလို ကိုယျအလေးခြိနျကိုလဲ ကဆြငျးစပေါတယျ ။ သို့သျော ဘယျအရာမဆို အလယျအလတျ အသငျ့အတငျ့လမျးစဉျမှသာ လိုခငျြတဲ့ပနျးတိုငျကို ရရှိနိုငျမှာပဲ ဖွဈပါတယျ ။
ဝိတ်ချဖို့အတွက် ညစာ ရှောင်သင့်လား
သင်ဟာ ဝိတ်ချသူတစ်ယာက်ဆိုပါက သင့်အနေနဲ့ ကယ်လိုရီတွေကို လိုတာထပ် ပိုမစားဖို့ ၊ လျှော့မစားဖို့လိုပါတယ် ။ ဒါကြောင့် ညစာရှောင်ခြင်းလိုမျိုးတွေဟာ ကယ်လိုရီ လျှော့ချရာမှာ အလွယ်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်လာပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် သတိပြုရန်မှာ ဒီလို ညစာရှောင်ခြင်းလိုမျိုးကနေ ကျန်းမာစွာ ဝိတ်မကျဘဲ ပြောင်းပြန်အကျိုးသက်ရောက်မှုအနေနဲ့ အလွန်အမင်းဆာလောင်မွတ်သိပ်စေခြင်း ဒါမှမဟုတ် လုံလောက်တဲ့ အာဟာရများ မရရှိခြင်း အစရှိသည်တို့ ဖြစ်သွားစေနိုင်ပါတယ် ။
သင့်အနေနဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်ကျဆင်းစေရန် လုပ်ဆောင်နေသူဆိုပါက ဘယ်လိုနည်းလမ်းပဲ သုံးပါစေ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်မှာကယ်လိုရီနည်းနည်းစားသုံးရေး ဖြစ်သည် ။ ခန္ဓာကိုယ်တွင် အဆီတပေါင်တိုင်းသည် ကယ်လိုရီ ၃၅၀၀ နှင့်ညီမျှသည့်အတွက် တစ်နေ့ကို ကယ်လိုရီ ၅၀၀ လျှော့စားပါက တစ်ပတ်လျှင် အဆီတပေါင် ကျမည်ဟု ဆိုနိုင်သည် ။
လူအများစု အထူးသဖြင့် ကျနော်တို့လမြန်မာ လူမျိုးများအတွက် နေ့လည်စာ ညစာသည် အဓိက စားသုံးကြသောကြောင့် ကယ်လိုရီများတတ်လေ့ရှိသည့်အတွက် ညစာရှောင်ရှားခြင်းဟာ ကယ်လိုရီအများကြီး လျှော့ချပြီးသား ဖြစ်ပါတယ် ။ သို့သော် ဒီနည်းလမ်းဟာ သင့်အနေနဲ့ ကျန်တဲ့ မနက်စာ နေ့လည်စာလိုတွေမှာ အလွန်အကျွံအများအပြားစားသုံးနေပါက ဒီညစာ ရှောင်တဲ့အတွက် ဆုံးရှုံးရတဲ့ ကယ်လိုရီတွေဟာ အဟောသိကံ အလကားဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ် ။ ဒါကြောင့် သင့်အနေနဲ့ ကျန်တဲ့အချိန်တွေမှာ ကယ်လိုရီကို တွက်ချက်ပြီးညီညွတ်မျှတအောင် စားသုံးဖို့လိုပါတယ် ။
ဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေ ရှိသလဲ ?
ဒီလိုညစာရှောင်ခြင်းရဲ့ ကောင်းကျိုး ဆိုးကျိုးတွေနဲ့ပတ်သတ်ပြီး နှစ်ပေါင်းများစွာ ငြင်းခုံနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ် ။ လက်ရှိသုတေသနရလာဒ်တွေအရတော့ မှန်ကန်စွာလုပ်ဆောင်ပါက ကျန်းမာရေးကို အကျိုးများစေသလို လွဲမှားစွာ လုပ်ဆောင်ပါက အသက်အန္တရာယ်ပေးစေသည် အထိ ကျန်းမာရေးထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ် ။
လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ အစားတစ်နပ်အများကြီးစားလိုက်ပါက ခန္ဓာကိုယ်တွင်း သကြားပမာဏဟာ တရှိန်ထိုးများပြားလာပါတယ် ။ ဒီလိုအဖြစ်အပျက်ဟာ ညစာစားသုံးချိန်မှာ ပိုတွေ့ရှိရတယ် ။ ညစာကို အများအပြား စားသုံးပြီး အိပ်ယာဝင်တဲ့အခါ ပိုလျှံတဲ့ သကြားဓာတ်တွေစာ အဆီအဖြစ်ပြောင်းလဲ သိုလှောင်လိုက်တဲ့အတွက် လူတွေဝလာရခြင်း ဖြစ်ပါတယ် ။
ဒါကြောင့်မှန်ကန်တဲ့ ညစာရှောင်ရှားခြင်းဟာ ကျန်းမာရေးကို အလွန်အထောက်အပံ့ဖြစ်စေပါတယ် ။ သို့သော် အလွန်အကျူး ရှောင်ရှားခြင်း အချိန်အတော်ကြာကြာလုပ်ခြင်းကတော့ ခန္ဓာကိုယ်ကို ထိခိုက်စေမှာပါ ။
ခန္ဓာကိုယ်ဟာ နေ့စဉ်လှုပ်ရှားဖို့အတွက် အာဟာရတွေ လိုအပါပါတယ် ။ အချိန်အတော်ကြာကြာ မျှတတဲ့ စနစ်မရှိတဲ့ ညစာရှောင်ရှားခြင်းမျိုးဟာ ခန္ဓာကိုယ်တွင်း အာဟာရပြတ်လပ်မှုကိုဖြစ်စေပြီး နောက်ဆုံး လူကို လဲသွားစေမှာပါ ။
ဒါကြောင့် ဒီလို ညစာရှောင်ရာမှာ
* စိတ်ချရတဲ့ နည်းလမ်းလိုပါတယ် ။ အချိန်တိုတစ်ခုအတွင်း ( အလွန်ဆုံး တလတာ ကာလ ) မှာ ကျန်းမာပြီး သေချာတိကျတဲ့နည်းလမ်းနဲ့ ညစာရှောင်ရှားပါက ကျန်းမာရေးကို အများကြီး အထောက်အကူပြုပါတယ် ။
* ဒါကြောင့် ဖြည်းဖြည်းနဲ့ နိုင်သလောက် အခြေအနေကအစပြုပြီး ညစာရှောင်ပါ ။ ဒီလိုလုပ်ခြင်းဟာ အချိန်တော်တော်ကြာကြာ ရှောင်နိုင်စေပြီး ခန္ဓာကိုယ်အတွက် ဒဏ်ခံနိုင်မှုကို တိုးမြင့်စေပါတယ် ။
* ညစာရှောင်ရန် ဆုံးဖြတ်ပြီးပါက အာဟာရပညာရှင် ဒါမှမဟုတ် ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ပါ
* အမှန်ကန်ဆုံး အစားရှောင်နည်းဆိုတာ မရှိပါဘူး ။ တချို့ဘာသာရေးအရ ဥပုဒ်စောင့်သူတွေဟာ တစ်နေကုန် အစားစားခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ပြီး ညနေ နေဝင်ချိန်မှ အစာပျော့ပျော့ကို စားကြပြီး တချို့ဘာသာရေးတွေမှာ အရည်ပဲသောက်ရတာမျိုး ရှိပါတယ် ။ အဓိကအချက်မှာ သင်နှင့်လိုက်ဖက်ညီသော အစားအစာရှောင်နည်းကို သိရှိရန် လိုအပ်ခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
* အချိန်ကာလ အတော်ကြာကြာထိ ညစာရှောင်ရှားခြင်းဟာ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် အန္တရာယ်ပါ ဖြစ်စေပါတယ် ။ အလွန်အမင်း အစားရှောင်ခြင်း ဟာ ကျန်းမာရေးအရ မကောင်းသလို အသက်အန္တရာယ်ကိုပါ အန္တရာယ်ပေးနိုင်ပါတယ် ။
* ဒီလို ညစာရှောင်ချိန်တွေမှာ ဗီတာမင် အားဖြည့်ဆေးတောင့်တွေစားပေးခြင်းကလဲ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် အထောက်အကူပြုပေးပါတယ် ။
ညစာရှောင်ခြင်းဟာ ဝိတ်ချလိုသူတွေအတွက် ကျန်းမာရေးကို ကောင်းမွန်စေသလို ကိုယ်အလေးချိန်ကိုလဲ ကျဆင်းစေပါတယ် ။ သို့သော် ဘယ်အရာမဆို အလယ်အလတ် အသင့်အတင့်လမ်းစဉ်မှသာ လိုချင်တဲ့ပန်းတိုင်ကို ရရှိနိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။